Sida loo sameeyo buug-yaraha: tillaabooyinka naqshadaynta buug-yaraha iyo tusaalayaal | Hal-abuurka khadka tooska ah
Haddii aan ka hadalno naqshadeynta garaafyada, waxaan sidoo kale ka hadalnaa naqshadeynta tifaftirka. Naqshadaynta tifaftirka waa wax kasta oo ku lug leh qaabaynta iyo qaabaynta waxyaabaha qaarkood si loo abuuro dhexdhexaad xayaysiis oo suurtagal ah. Taasi waa sababta qoraalkan, waxaanu kuugu soo bandhigaynaa aduunka naqshadaynta tifaftirka, gaar ahaan aduunka buug-yaraha.
Weligaa ma ka fikirtay sida buug-yaraha xayaysiisyada ee nagu hareeraysan oo naga caawinaya inaan xog-ogaal u nahay loo qaabeeyey? Sidoo kale, Maqaalkan kaliya kumagula talineyno sida loo naqshadeeyo buug-yaraha, laakiin waxaan sidoo kale ku tusin doonaa qaar ka mid ah tusaalooyinka ugu fiican, si aad u dhiirigeliso oo kaa caawiso inaad doorato nooca ugu habboon nooca shaqadaada.
1.1 Noocyada triptychs
2 Talooyin ama talo si loo abuuro triptych
3 barnaamijyada naqshadaynta
3.2 Daabacaha Affinity
3.3 Daabacaha Microsoft
Haddii ay dhacdo inaadan weli garanayn waxa uu yahay triptych, waxaa lagama maarmaan ah inaad si toos ah u fahamto waxa ay tahay si aad u naqshadeyso oo aad u sameyso. triptych ah waa nooc ka mid ah buug-yaraha macluumaadka, waxaa la sheegay in ay tahay wargelin sababtoo ah waxay nagu wargelisaa oo gudbisaa fariin la xiriirta shay gaar ah.
Waxaa jira buug-yaro sheegaya dhacdooyinka oo ku wargeliya dhacdada ama buug-yaraha ka warbixiya guud ahaan shirkadda, oo habkan ayaa u soo bandhigi kara dadweynaha dhammaan xogta lagama maarmaanka ah. Marka la soo koobo, triptych waxay naga caawinaysaa inaan xog-ogaal u noqono, sidoo kale, waxay ku sifoobaan in loo qaybiyo saddex qaybood.
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee buug-yaraha noocan oo kale ah ayaa ah in loo qaybiyo dhowr qaybood. qaybinta macluumaadka ayaa aad uga wanaagsan meel ku taal, markaa akhristuhu dhib malaha marka uu fahmo waxa uu akhrinayo, sababtoo ah haddii si sax ah loo naqshadeeyay, mid kasta oo ka mid ah qaybaha garaafka ayaa si fiican u yaal.
Triptych xayeysiiska, sida ereygiisa tilmaamayo, ayaa mas'uul ka ah horumarinta ama ka warbixinta shay. Tusaale ahaan, shaqadeeda ugu weyni waxay noqonaysaa inay ku qanciso ama ka dhaadhiciso macmiilka inuu iibsado ama isticmaalo nooc ka mid ah alaabta. Buug-yaraha noocaan ah waxaa badanaa lagu arkaa qaybaha sida dukaamada waaweyn, kafateeriyada, hoteelada ama xitaa timo-jaraha.
Shaki la'aan waa mid ka mid ah warbaahinta offline-ka ugu muhiimsan.
Triptych dacaayadda waxay u ekaan kartaa mid la mid ah tii hore, maadaama labaduba ay wadaagaan hal shaqo oo isku mid ah: in lagu qanciyo dadweynaha shay. Waxa laga yaaba in uu ka duwan yahay kii hore waa in aanu inta badan wadaagin boos isku mid ah.
Sidoo kale, marka aan ka hadlayno dacaayad ama xayeysiis. Kaliya kuma qancineyno macaamilka in badeecadeena ay lama huraan tahay sidaas darteedna ay tahay in la isticmaalo, laakiin waxa aanu ka dhaadhicinaynaa in habka aanu u fikirayno iyo sida aanu u iibinayno uu yahay mid sax ah taasina ay tahay sababta uu u cuni lahaa.
Marka aan ka hadalno triptych art, waxaan ka guureynaa wax kasta oo macluumaad ah. Buug-yaraha noocaan ah, Waxay mas'uul ka yihiin ka dhaadhicinta macmiilka iyada oo loo marayo walxaha garaafyada. Shaki la’aan, waxay ka mid yihiin su’aasha aan mararka qaarkood is weydiinno: sidee buu sawir ama sawir u soo jiidan karaa dareenka bulshada?
Talooyin ama talo si loo abuuro triptych
Kahor intaadan bilaabin naqshadaynta, waa muhiim in aad si cad u leedahay ujeedooyinka ugu muhiimsan sababta aad ugu baahan tahay inaad naqshadayso. Marka aynu ka hadlayno ujeedooyinka, waxaanu tixraacaynaa ujeedada loo qaabayn doono, nooca dadweynaha loo hagi doono, nooca lahjadda ayaanu kula xidhiidhi doonaa dadweynahayaga alaabta ama shirkadda. Macluumaadkee ayaan u malaynaynaa inay ka muhiimsan yihiin oo xiiso badan yihiin inaan bixinno ama xitaa sida aan uga dhaadhicin karno macmiilka si aan buug-yarahayagu u noqon mid aan la dareemin.
Mar haddii aad jawaab cad ka hesho su’aalaha aanu hore u soo jeedinay, waxa lagama maarmaan ah in loo gudbo dhinacyo badan oo farsamo. Tusaale ahaan, dhinaca farsamada wanaagsan waxay noqon doontaa nooca template ama grid Waxaan u baahanahay inaan ku kaydiyo macluumaadka meel bannaan ama sanduuqa qoraalka ee buug-yarahayga.
Waji noocee ah ayaa u fiicnaan kara buug-yarahayga haddii ay run ahaantii ka hadlayso mawduuc gaar ah oo aan u baahanahay inaan fiiro gaar ah u yeesho anigoo shaqaynaya oo la akhriyi karo. Midabkee ayaan isticmaali doonaa si ay nafsiyan ugu habboonaato macluumaadka iyo waxyaabaha garaafyada ah ee aan isticmaali doono.
Marka aan u naqshadeyno buug-yaraha shirkad gaar ah, waxaan sidoo kale ogeysiineynaa dadweynaha ujeedooyinka muhiimka ah ee shirkadu yeelan doonto iyo qiimaheeda. Laakiin haddii uu jiro hal shay oo aan dhammaanteen ku heshiinno, waa in triptychs aysan u adeegin oo keliya gudbinta fariimaha iyo wargelinta, laakiin sidoo kale inay soo jiidato oo ay qanciso.
Markii hore waxaan ka faalloonnay in xayeysiisyada triptychs ay ujeedadu tahay in macmiilku iibsado ama isticmaalo alaabtayada. Hagaag, tani waa halka aan naqaano sida suuqgeyntu u soo gasho ciyaarta. Dejinta xeeladaha iyo qorsheyntooda buug-yarahaaga waxay ka dhigi doontaa dadwaynaha xitaa inay kuugu dhawaadaan adiga iyo alaabtaada.
Saxaafaddu waa muhiim marka aad xalliso dhammaan qodobbadii hore, taas awgeed, waxaa muhiim ah inaadan xisaabta ku darsan oo kaliya sida kor loogu qaado ama loo qanciyo. laakiin sidoo kale waxa warbaahinta aad ku samayn doonto.
Taasi waa sababta, inkastoo xaqiiqda ah in triptych sidoo kale waa dhexdhexaad xayaysiis ah, sidoo kale waa muhiim, iyo sidoo kale xiiso leh, inaad ku darto warbaahinta kala duwan ee aad isticmaali doonto. Sidan oo kale ma ogeysiinaysid waxa dhabta ah ee muhiimka ah, laakiin sidoo kale meelaha aad ka samaynayso.
Ugu danbayna waxa muhiim ah in aad ku xisaabtanto miisaaniyada bilowga ah ee aad qorshaynayso in aad isticmaasho iyo sida loo maareeyo mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha aad ku darayso. Haddii aan ka hadalno miisaaniyada, waxaan samayn karnaa wadarta dhammaan qalabyada lagama maarmaanka u ah in lagu daro habka abuurista iyo naqshadeynta: kombiyuutarada, imtixaannada daabacaadda, moodooyinka, iwm. Dhammaan qodobadan waa in lagu xisaabtamaa, marka lagu daro wakhtiga aad gelisey mid kasta oo ka mid ah. Taasi waa sababta aan kugula talineyno inaad u qaybiso miisaaniyadaada qaybo kala duwan: qaybta cilmi-baarista iyo falanqaynta, qaybta fikradda iyo qaybta fikradda.
Mar kasta oo aan ka hadalno barnaamijyada qaabeynta iyo qaabeynta, kani wuxuu ku jiraa 10ka ugu sarreeya oo ka mid ah kuwa ugu horreeya miiska. InDesign waa barnaamij ka mid ah barnaamijyada kala duwan ee qayb ka ah Adobe. Cilada kaliya ee jirta ayaa ah in uu yahay barnaamij u baahan kharash bishii ama sanadle ah.
Qiimaha maaha mid aad u sarreeya, maadaama aan barnaamijkan oo keliya lagu soo darin, laakiin sidoo kale kuwa kale oo badan ayaa sidoo kale ku caawin doona haddii aad naftaada u hurto naqshadeynta. Waa qeexan Waa barnaamij ku habboon qaabaynta, waxay leedahay suurtogalnimada in aad naqshadayso shabaqyadaada iyo sidoo kale gal ballaaran oo xarfo ah.
Haddii aan kugu qancinnay InDesign, barnaamijkan waxaan kugu qancin doonaa laba jeer inta badan, maadaama uu yahay barnaamij qaabayn ah oo aan u baahnayn rukhsad, kaliya waa inaad bixisaa lacag aan aad u badanayn maadaama uu leeyahay liisan.
Waxa lagu garto barnaamijkan waa in aad marin u heli karto gal ballaadhan oo xarfo ah, sawirro iyo xubno garaafyo ah oo nooc kasta ah. Waa barnaamijka ugu fiican haddii aad raadinayso kala duwanaansho mashruucyadaada iyo si aad u awooddo inaad si raaxo leh ugu shaqeyso.
Microsoft Publisher waa barnaamijka daabacaadda Desktop-ka ee Microsoft oo aad u heersareeya. Ma aha oo kaliya inaad haysato ikhtiyaarka abuurista naqshado la xidhiidha naqshadaynta tifaftirka, laakiin taa beddelkeeda, waxaa loo qaabeeyey iyada oo ujeedadu tahay naqshadaynta iyo abuurista walxaha leh dabeecad xayeysiis oo aad u badan.
Marka la soo koobo, haddii aad tahay qoraa oo aad u heelan tahay qaabaynta iyo dejinta wargeysyada ama buugaagta, waa barnaamijka ugu fiican. Intaa waxaa dheer, waxa ay leedahay si cadaalad ah u fududahay in la isticmaalo interface, kaas oo u ogolaanaya shaqadu inay noqoto mid dareere ah. Ma seegi kartid bandhigan wax kasta oo adduunka ah.
Scribus waa barnaamij daabacaadda miiska waxaana sidoo kale loo arkaa nooc ka mid ah software-ka si buuxda loo sii daayay. Sidoo kale waa barnaamijka ugu fiican haddii aad raadinayso joornaal ama qaabeynta buugaagta. Maxaa ku sifoobay barnaamijkan, waa in aad ku isticmaali karto luqado badan in aad diyaar u tahay, sidaas darteed, waa ku haboon oo aad u fudud in la isticmaalo.
Waxa kale oo jirta suurtogalnimada in lagu shaqeeyo qaabab kale oo aad u xiiso badan, sida qaabka SVG. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale u habeyn kartaa xarfaha sida aad jeceshahay iyo Waxay diyaar u tahay labada midab ee muhiimka ah si aad u dhoofiso shaqadaada: CMYK iyo RGB.
Naqshadaynta buug-yaraha waa hawl wakhti badan qaadata laakiin ma fududa haddii aad xisaabta ku darsato qaar ka mid ah talooyinka aanu soo jeedinay. Samaynta weji cilmi baaris hordhac ah oo wanaagsan ayaa muhiim u ah horumarinta naqshadeynta, maadaama ay qayb ka tahay habka hal-abuurka iyo fikradda xigta.
Marka la soo koobo, door mawduuc aad rabto inaad ka hadasho oo had iyo jeer maskaxda ku hay qaar ka mid ah su'aalaha kaa caawin kara inaad ka dhigto buug-yarahaaga mid qumman oo shaqeynaya. Iyo haddii ay dhacdo shaki, waxaa muhiim ah inaad ku dhiirigeliso naqshado kale oo kaa caawin kara inaad horumariso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo sameeyo triptych